Shicilela Iposi yasimahla kwiBlog yeNdawo yeReal Estate
UTshazimpuzi 30, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Ukunyusa okungcono onke amanqaku (iposti yondwendwe) aya kuhanjiswa kwii-medias zentlalo.
Izinto ezilungileyo ezivela kwindwendwe
1. Abandwendweli ekujoliswe kubo. Okokuqala, le yindawo yokugcwala ejolise kwiwebhusayithi yakho. Ukuba inqaku linomdla ngokwenene kumfundi, kukho amathuba aphezulu okucofa kwikhonkco. Kwaye ukufuduka kwabaphulaphuli abatsha kwisiza-ngumvuzo ogqwesileyo kumniniyo ngomsebenzi owenziweyo.
Ngenxa yemeko yeenjini zokuphanda zotshintsho ukuya kwinqanaba ngokwezinto zokuziphatha, ukwanda kokuhamba kwabafundi abanezixhobo eziphezulu zangaphandle kuya kuba nefuthe elihle kwisikhundla sendawo kwiziphumo zokukhangela. Kuyaphawuleka ukuba ukubhloga kweendwendwe kuzisa ukugcwala abagqibeano, njengoko undwendwe luqhubekeka lusiya kwindawo enomdla kwizifundo zayo. Ezi ndwendwe zihlala ixesha elide kwibhlog kwaye zikhangele amaphepha ambalwa otyelelo.
2. Ababhalisi abatsha. Ithuba lokufumana umntu obhalisileyo kwisithuba seendwendwe likhulu kakhulu. Kukho izizathu ezahlukeneyo zokuthi:
Ukubeka isithuba kwimithombo engasasebenziyo kuya kubangela ukuphuma kwabo babhalisile kuloo ndawo. Ukuba nombhalo wakho kuloo ndawo kuya kugqithisela ngokuzenzekelayo inxalenye yokuthenjwa ukusuka kuloo ndawo iye kuwe. Kufuneka ubenomdla kubo kulwazi lwakho.
Ukusuka kwinqaku leendwendwe kuya kuhamba ngokwabo abaphulaphuli abafanayo, okuqinisekileyo ukuba unomdla kwiwebhusayithi yakho. Isakhono sokufumana umntu obhalisileyo kule meko siphezulu kakhulu xa kuthelekiswa nendwendwe elingalawulekiyo.
Nangeyiphi ndlela, Ukufika kwe iindwendwe ezintsha ngeke Nyusa Inani lababhalisile. Ababhalisi bakha amathambo e-webhusayithi, kwaye okukhona ekhuselekile yena usezinyaweni zakhe. Le yeyesibini amanqatha kunye nale nto ungayifumana kwinqaku leendwendwe.
3. Ukonyusa isinxibelelaniso. Enye ibhonasi ubukho kwisicatshulwa sekhonkco esingaboni kuphela abafundi kodwa kunye neenjini zokukhangela. Olu nxibelelaniso luza kusithumela ubunzima bendawo esinikelayo. Emva koko, oku kuya kubonelela ngokwenyusa ukusebenza kwePR. Ubukhulu bereferensi kwindawo yakho, kokukhona uya kuba mkhulu amathuba okufumana imigangatho ephezulu kuGoogle nakwi-Bing.
4. Ukurhweba. Iindlela I-PR yegama, impahla yentengiso okanye iinkonzo. Njengosaziwayo, kokukhona ukhanyisela kwiindawo ze-niche, kokukhona uthembela ngakumbi, kwaye kokukhona uya kuba nefuthe kule ndawo. Awunakuba nesikhundla esiphezulu kwiinjini zokukhangela, kodwa ukuba igama lakho \_ iimpahla \_ inkonzo lisemilebeni yomntu wonke - indawo yakho iya kukhula, kwaye iimveliso okanye iinkonzo ziya kubakho. Ukubhloga kweendwendwe- isixhobo esihle se-PR!
Njengoko u bonayo, abaphembelelayo iingenelo ngaphezu - yiyo Candelo iinxalenye ze Uphuhliso oluphathekayo hayi kuphela website, kodwa kwakhona ishishini.
Ungayibhala njani itayile yondwendwe
Undwendwe amanqaku, ziyafana i ngcebiso ngoko eqhelekileyo umbhalo. Masis Qaphela iqhosha mathuba Ngokuqinisekileyo ukulandela.
Ukwahluka kwesicatshulwa. Le yinto ephambili kuyo nayiphi na izicatshulwa. Akukho nqaku elikhethekileyo aliyi kuzisa wena okanye umnini ndawo. Ngaphezulu kokungafani kwesicatshulwa, amathuba amaninzi ngeli nqaku kufuneka aphumele phezulu kwiziphumo zokukhangela kwaye atsalele iindwendwe kwindawo.
Umanyano, ukungaguquguquki, ukucaca. Isicatshulwa sakho senqaku leendwendwe kufuneka sicace kubafundi kwaye siphathe intsingiselo ethile. Zama ukwenza isicwangciso sokubhala, ngoko ulwazi lubonelelwe ngokulandelelana, ukutyhila isifundo ngokupheleleyo.
ukufaneleka. Olu lwazi kufuneka lubonelele abafundi beblogi, kwaye ngokubanzi. Ungabhali malunga nenyani ephelelwe lixabiso layo okanye ukuba luncedo ukuza kuthi ga ngoku.
Ubunzulu besiqulatho solwazi. Zama ukuphuhlisa umxholo ngokupheleleyo, ungoyiki ukuya kwiinkcukacha. Ulwazi olubanzi nolunzulu luya kwenza inqaku lakho libe likhulu ngexabiso laso kumsebenzisi nakwinjini yokukhangela. Kodwa nakweyiphi na imeko, musa ukuthulula amanzi kwi-sieve, uzama ukunyusa inani lesicatshulwa.
4 ngenxa ye 3 iivoti
Ukubhloga iindwendwe (ukuhambisa iindwendwe) yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa ukuthengisa kwakho. Ukunyusa okungcono onke amanqaku (iposti yendwendwe) iya kuhanjiswa kwimithombo yeendaba zentlalo
okwenyaniWW Aprili 30, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Iposi yeNdwendwe yezezimali, Isibhalele ezemali, UkuBloga iBlogging, Post Guest, Undwendwe lweNdwendwe yiNdawo ethengisa izindlu, Ukuphuculwa kwekhaya lendwendwe, Undwendwe lwePropathi yeNdawo, Indawo yokundwendwela iindwendwe yokuphuculwa kwekhaya, Indawo yokuthumela iindwendwe, Iposi yeNdwendwe yokuPhuculwa kweNdlu ekhaya, Ukuphuculwa kwekhaya lokungenisa iindwendwe, Ukuphuculwa kwasekhaya ubhalele thina, Iposi yeeNdwendwe zaBantu ePosi, ibhlog yeendwendwe ethengiswayo, ibhlog yendawo yokuhlala, Indawo yokubloga yeendwendwe, ipropathi yendwendwe ethengisa izindlu, Indawo yokuthumela iindwendwe ethengiswayo, Ubuninimhlaba sibhalele thina, Ngenisa ukuphuculwa kwendlu ekhaya, sibhalele, Sibhalele ukuphuculwa kwekhaya, sibhalele izindlu nomhlaba. Bookmark le Permalink.
Oktobha 4, 2017 Ihlala ixesha elingakanani indlu yakho? Indlu yakho inokuba imi iminyaka engamakhulu, kodwa oko akuthethi ukuba iziqwenga ezakha ikhaya lakho ziya kuhlala ixesha elide. Nxalenye nganye yendlu yakho — umgangatho, iingcango, izixhobo, isitena, izixhobo zombane nezinye — zinobomi obahlukileyo. Ke, luyakuba yintoni uvavanyo lwexesha? Kwaye yintoni engavumi? Funda ngakumbi malunga nokuphila kobomi beendawo ezahlukeneyo kwikhaya lakho. Izixhobo Izixhobo ezincinci ezinjenge microwave yakho, humidifier, okanye ifriji encinci zinobomi obufutshane, obuhlala […] exhonyiweyo Ukuphucula iKhaya